Shasha yeKunyora Mabhuku, Achebe, Anoshaya muAmerica
WASHINGTON — Munyori wemuNigeria ane mukurumbira pasi rose, Chinua Achebe, ashaya neChishanu muBoston, America, mushure mekurwara kwenguva pfupi. Achebe anga ava nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
Achebe, uyo ane bhuku rine mukurumbira pasi rose, Things Fall Apart, ange ari muzvinafundo paBrown University kuRhode Island muAmerica. Things Fall Apart rakaturikirwa mundimi makumi mashanu, uye rikatengeswa makopi anosvika mamiriyoni masere.
Mamwe emabhuku akanyorwa na Achebe anosanganisira No Longer at Ease, Arrow of God, A Man of the People na Anthills of the Savannah.
Muna 2007, Achebe akawana mubayiro weMan Booker International Prize for Lifetime Achievement, akapihwa mari inosvika zana nemakumi maviri ezviuru zvemadhora.
Muna 2010, munyori akapihwa zvakare mubairo weDorothy & Lillian Gish Prize, uyo une mari inoita mazana matatu ezviuru zvemadhora. Achebe ane mimwe mibayiro yakawanda yaakapihwa senzira yekuremekedza mabasa ake ekunyora.
Munyori uyu akaberekwa achinzi Albert Chinualumogu Achebe musi wa 16 Mbudzi 1930 ku Nigeria. Akaroora mudzimai wake, Christie Okoli, muna 1961. Vaviri ava vane vana vana, uye vazukuru vashanu.
Munyori ane mukurumbira muAfrica nepasi rose, Chenjerai Hove, anoti kushaya kwa Achebe kwarwadza vanyori vakawanda pasi rose. Hove anoti Achebe ange ari munhu ane chido chekudzidzisa vanyori nevaverengi vemabhuku magariro netsika dzechivanhu.
Hove, uyo akahwina mubairo we Noma Award For Publishing In Africa muna 1989, anoti vechidiki vanofanirwa kuverenga mabhuku aAchebe kuitira kuti vadzidze zvakawanda kubva kumunyori uyu.
Hurukuro Nava Chenjerai Hove